1. Uninzi lwabantu lukhangela imfihlelo yomntu ogqibeleleyo. Ngetrone yobutsha Ngokufumana ubume obuhle kunye nendlela yokulahla amanqatha esisu. Oko ukongeza ekubuyiseni ulutsha Yongeza isondo ngokunxiba iimpahla ezifanelekileyo kuzo zonke iindlela. Ikwalandelwa yimpilo entle Akukho mntu unokusinika ngaphandle kwethu Namhlanje sinenyathelo elilula, kodwa lifuna umonde kunye nokuziphatha. Ukuba uyayidlulisa, uya kuqinisekiswa ukuba inani lakho elihle liya kubuya ngokuqinisekileyo.
2. Sela iglasi enkulu yamanzi acocekileyo phambi kwesidlo ngasinye. Le ndlela, ukongeza ekwenzeni ulusu lwakho luhle Inkqubo yokuzikhupha Ikwasinceda ukugcwalisa ngokukhawuleza ngokungakholelekiyo Kuba amanzi yinxalenye ebalulekileyo yomzimba Ihlaziya emini Ukusela amanzi imizuzu emi-5 ukuya kweli-10 ngaphambi kokutya sonke isidlo. Ikwasenza ukuba sisele ngokukhawuleza okukhulu Kuba amanzi ebehanjiswa ngepani ngenxa yokutya kuqala Kodwa kuya kufuneka ndikwenze umkhwa rhoqo, uyabona ukuba ulahlekelwa ngamanqatha esisu? Akunzima
3. Khetha ukutya Iyaqondakala iluncedo Xa isisu siqala ukuza Ibonisa ukuba isondlo sethu kukhetho lokutya sikhathalelwe ikakhulu, akunjalo? Kulungile, soloko uqala ngaphezulu. Ngokukhetha ngononophelo lokutya, okubalulekileyo kwiindlela zokulahleka kwamafutha esiswini Into yokuqala - ukunqanda iziselo ezibandayo. Iidyuli ezineswekile eninzi Yitya ukutya okunestatshi esincinci. Okanye tshintshela kumgubo oluncedo njengokhozo olupheleleyo Okanye isonka, isonka sengqolowa ngokumodareyitha kwisidlo ngasinye Ukuba iyirayisi, ngoko ke ileli enye kwisidlo ngasinye. Yongeza ukutya kweprotein okufunekayo ukulungisa iindawo ezonakalisiweyo. Kunye nokutya okunefayibha eninzi Ungalibali ukuba ukutya kukusebenzela umzimba wakho. Ihlala isicatshulwa esinokuthenjwa. Masikhethe ukufumana into eluncedo emzimbeni ukusukela namhlanje ngcono.
4. Khetha umsebenzi owuthandayo kwaye uwenze rhoqo, kwaye amakhulu abantu akakunandiphi ukuzilolonga ngendlela efanayo. Andifuni ukugxila kuloo nto Kufuneka ibe kuko nakuphi na ukuzilolonga okanye luhlobo luni lomthambo, sicela nje ukuba ibe luloluthando esiluthandayo. Kwaye yenze rhoqo, iintsuku ezingama-3-5 ngeveki, kuxhomekeke kuncedo Kodwa kufuneka ndenze ngokulandelelana ngaphezulu kwemizuzu engama-30 ukuya kwiyure e-1 ngokuxhomekeke kubudala kunye nokuba sempilweni komzimba Abanye abantu bathanda ukuhamba, ukubaleka, iyoga, ukudanisa, ukukhwela ibhayisikile, ukuqubha, i-cardio, njl.njl. Kwaye kunye nezinye iindlela zokuziphatha Indlela yokunciphisa amanqatha esisu Ngaphandle kokukhawuleza Amanqatha e-Belly aya kuncitshiswa kancinci, alandelwe sisempilweni Kunye nokuqaqamba njengoko kubonakala
5. Yiba nethemba Ukunciphisa uxinzelelo Rhoqo yandisa amandla akho kunye ne-EQ. Le yeyona nto inzima ukuyenza. Ekuzameni ukulawula iingcinga, iimvakalelo, okanye uxinzelelo Logama nje singabantu kwaye siphila Kodwa zama ukuqonda izinto Ehlabathini akukho nto iqinisekileyo ngayo Ulonwabo lwalunathi kungekudala. Ukubandezeleka kungena kwaye kuya kudlula kungekudala. Yonke ingxaki inesisombululo, qaphela nje. Kwaye ngexesha lokuphumla Zinike amandla Shiya umthwalo okwethutyana kwaye ujonge ukukhathalela umzimba wakho kuqala. Sukuvumela uxinzelelo lusikhathaze. Uxinzelelo ngakumbi xa usitya Okukhona uxinezeleka, kokukhona ukhathazeka Okubaluleke ngakumbi, uxinzelelo Utshaba ngempilo yethu ngazo zonke iindlela
6. Elula, ayinzima kwaphela, enyanisweni, kukuzikhathalela. Ngokuzithanda nokuzinika izinto ezintle kwakhona Kodwa ifuna ukuziqhelanisa rhoqo Kuba impilo entle ayithengiswa Ukuba uyafuna, kuya kufuneka uyenze ngokwakho.